ब्राउन सुगर सहित दुई भारतिय युवक प्रहरीको नियन्त्रणमा - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
दोधारा । माहाकालीमा ब्राउन सुगर सहित दुई भारतिय युवकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ् । माहाकाली नगरपालिका वडा नं. १, पशुपती वोर्डिङ्ग स्कुल नजिक उनि दुबैलाई अबेर सा“झ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको ईलाका प्रहरी कार्यालय दोधारा चाँदनीका प्रहरी निरिक्षक नरेन्द्र बहादुर चन्दले जानकारी दिएका छन् । प्रहरीले भारतको जिल्ला चम्पावत, ग्राम बानबासा निवासी अन्ताजी वर्ष २८ का पवन सिंह खोलीया र वर्ष अन्ताजी २४ का जितेन्द्र चन्दलाई प्रहरीले ब्राउन सुगर सहित पक्राउ गरेको हो ।
उनिहरु संग लागु औषध ब्राउन सुगर, युए ०३५३ नम्वरको भारतिय नम्वर प्लेटको मोटरसाईकल नियन्त्रणमा लिएको बताईएको छ् । प्रहरीले कती ब्राउन सुगरको मात्राको बारे भने खुलाएको छैन् । शुदुर पश्चिम लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो शाखा कार्यालयको टोलीले ब्यापारी बनेर बिगत ६ महिना देखि पछ्याई रहेको बताएका छन् । प्रहरीले उनिहरुलाई सेम्पल लिएर आउनको लागी माहाकाली नगरपालिका वडा नं. १ मा बोलाएपछि नियन्त्रणमा लिएको शुदुर पश्चिम लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो शाखा कार्यालयका टोली ईन्चार्ज धनन्यजय मल्लले जानकारी दिएका छन् ।
‘यिनीहरु मध्ये पवन खौलिया बिगत लामो समय देखि लागु औषध कारोवारमा संलग्न भएका ब्यक्ती हुन्’ शुदुर पश्चिम लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो शाखा कार्यालयका टोली ईन्चार्ज धनन्यजय मल्लले भने । उनि दुबै भारतिय युवकलाई लागु औषध ब्राउन सुगर सहित जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर पठाईएको छ् ।
प्रभु ग्रुपले ल्यायो सुविधै-सुविधाको ‘प्रभु पे’ वालेट,के-के छन् सुविधा ?
काठमाडौं । प्रभु ग्रुपले नेपालमा ‘प्रभु पे’ नामक डिजिटल वालेटको सुरुवात गरेको छ । उक्त वालेटको उद्घाटन […]
प्रधानमन्त्री साउन ६ गते नेपाल आउने
साउन १ ।काठमाडौँ,स्वास्थ्य उपचारको लागि अमेरिका पुग्नु भएका नेपाली काँग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री […]
इलाम, ६ मङ्सिर । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत इलाम क्षेत्र नं २ का सांसद तथा […]
यस्तो छ कृष्णाको नग्न फोटोको रहस्य
एजेन्सी, बलिउड अभिनेता जैकी श्राफकी छोरी कृष्णा श्राफको नग्न फोटो सुटले बलिउड गर्माएको छ । बलिउडबाट […]
साउन २८। काठमाडौँ, गत आवमा रु एक खर्ब ६० अर्ब नौ करोड सङ्कलन गरी आन्तरिक राजस्व विभागले तोकिएको लक्ष्यको […]